VIDEO: Xildhibaano ka hadlay xaaladda Puntland, kal-fadhiga u furmay iyo arrimaha xukuumadda.
Maalintii 2aad waxaa xarunta golaha shacabka Puntland ee magaalada Garoowe ka socda kal-fadhiga 47aad ee barlamaanka Puntland oo uu shalay si rasmi ah u daahfuray madaxweynaha Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Deni.
Haddaba xildhibaano katirsan barlamaanka Puntland oo siyaabo kala duwan ula hadlay warbaahinta ayaa waxa ay ka hadleen kal-fadhiga u furmay, ajandayaasha horyaala ee la xisaabtanka xukuumaddu ka mid yahay iyo xaaladda guud ee Puntland.
war meesha xildhibaano,ma joogaan,ee umadda ayaan been loo sheegin.
Deni waa madaxii maamul ee ugo musuqmaasuq badanaa ee soo mara geyiga Puntland.
Halkii lala xisaabtami lahaa,baaba loo sacabtomayaa.
War Dakadii Bossaso,isaga iyo Gaas iyo xildhibaanada la soo magacaabo ee jiray labadaa xili baa si musumaasuq cad ah,waliba lacag si musuqmaasuq ah,ay u keeneen Gaas iyo Deni la siiyey xildhibaanada si ay u aamusaan.
Deni,SEEDIGII buu mareerye uga dgigay,Dakadii Bossaso,si loo boobo hantida dadwaynaha Puntland.
Dakada Bossaso iminka waxay halis u tahay in ay xiranto kadanbow markii bacaad uu buuxiyey,marinka laga soo galo,
Waa lago oo hal mar ayey dhacday,in Deni wax laga waydiiyo fashilka maamulkiisa taasina waxay dhacday,2019 waa tii uu isago caraysan oo ka baxay baarlamaankii,nasiib daro,kuwii lalaha,waa xildhibaano fiican waa ay isbadaleen,sidii lago yiqiin,Soomaalida oo u badan dad aan ku dhagin mowqifkooda,oo si sahal ah,looga leexin karo,siyaabo guracan oo ay Soomaalido ku dhaqanto oo la xiriira hab beeleedka lago dhaqo,oo ku dhisan,cadaalad daro iyo eex la rabo in aan wax la xisaabtan ah,uusan dhicin.
Deni waa shaqsigii Baabi’iyey Baarlamaankii Puntland,oo keensaday,shaqsi la yiraahdo Abwaan,oo runtii ah,shaabad uu Deni jeebka ku sito.
War Deni,halala xisaabtamo oo beentiisa yaan waxba laga soo qaadin.
Puntland waxay u baahantahay,shacab aan ka gaban,runta iyo xaqiiqada jirta,waa cid u maqan majirto,maamulkaana,ma aha mid dan u ah,shacabka Puntlan ee waa mid u yimi ka ganacsiga hantida dadwaynaha reer Puntland.